Parrot Zik 2.0, finday an-tariby izay tsy tadiavin'ny hafa | Vaovao IPhone
Parrot Zik 2.0, ny headphones tsy misy tariby izay tadiavin'ny hafa
Pablo Aparicio | | Fitaovana IPhone
Tsy mora ny misafidy headphone tsara. Misy maodely an'arivony, samy manana ny mampitovy azy ary mahalana ny mividy sasantsasany ary faly hatramin'ny voalohany. Rehefa mandeha ny fotoana dia tonga any amin'izy ireo isika, saingy alohan'izay dia nandany fotoana be dia be izahay nitady ny preset izay mifanaraka amin'ny safidintsika. Zavatra tsy hitranga aminao izany Parrot Zik 2.0. Toy ny rehetra, hanana ny fampitoviana azy manokana ianao, saingy azonao atao ny manova azy amin'ny mametaka maimaimpoana azo alaina ao amin'ny App Store. Aza adino ny fijerinay ireo headphone marani-tsaina sy marobe avy any Parrot ireto.
1 Votoatin'ny boaty
3 Kalitao feo
3.1 Rafitra fanafoanana ny tabataba
5 Fampiharana Parrot Zik 2.0
7 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Ny Parrot Zik 2.0 dia tonga ao anaty boaty mahazatra, toy ny hafa rehetra izay vonona ny ho tsara amin'ny fivarotana na fampisehoana. Maneho hevitra momba izany aho satria nahita marika hafa tonga tamin'ny azy manokana, zavatra izay toa tena tsara ary manamora ny fitaterana ny headphone. Mazava ho azy fa fanehoan-kevitra kely fotsiny izany. Misokatra indray mandeha ny boaty, atsanganay ny baoritra misy ny headphone ary hitantsika:
Fakan-tsarimihetsika Parrot Zik 2.0
3.5mm jack tariby.
Kitapo hiarovana ny headphone.
Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa.
Ny tariby USB hampiasainay ho an'ny aloaho ny bateria rehefa lany izahay ary ny Jack 3.5mm dia ny mampifandray ny headphones amin'ny audio output, toy ny an'ny solosaina na smartphone.
Tafiditra ao ny bateria, saingy misy rava. Zavatra hitako fa miabo be io, satria mino aho fa hijanona tsy hiasa intsony ny bateria rehetra eto an-tany amin'ny farany ary afaka manova azy mora foana tahaka ireo headphone ireo dia hanamora ny fitadiavana solo sy hanova azy amin'ny ho avy. Ny "olana", amin'ny teny nalaina, dia izay tsy misy sary amin'ny torolàlana hametrahana azy, zavatra tsy hitako. Voalohany, noho izany dia tsy hitanao firy izany, ny litera manondro ny toeran'ny headphone (L ho an'ny ankavia ary R ho an'ny ankavanana) dia fotsy amin'ny alimo ary tamin'ny voalohany dia tsy azonao antoka hoe iza no, mandra-pahitanao azy ireo .
Ao amin'ny torolàlana dia milaza izy fa hampiakatra ny mpampijanona andriamby an'ny mpandahateny havia ary, raha tsy misy sary dia tsy fantatsika izay hatao. Raha ny tena izy dia mora be. Araka ny hitanao amin'ity sary manaraka ity, nopotehina tanteraka ilay handset havia. Mba hanesorana azy dia mila mampiasa hery kely isika hampisarahana ireo andriamby. Izay ihany. Ary raha mora ny manala azy dia mora kokoa ny mametraka azy. Ajanona fotsiny io.
Afaka mitazona ny bateria sahabo ho 8ora miaraka amin'ny zava-drehetra mandeha, fa afaka tonga amin'ny 18ora raha mampihetsika ny maody amin'ny dia isika. ny fomba fitsangatsanganana tsy mandeha ny tontonana sy ny Bluetooth, mamela izay ilaina ihany no mandeha. Raha te hihaino mozika amin'ity maody ity dia tsy maintsy ataontsika amin'ny tariby mifandray aminy.
Ny endrika tsy holazaiko no tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny fanaovana headphone tsara sy tsara dia sarotra. Ny azoko lazaina dia izy ireo tsara tarehy kokoa velona izany amin'ny sary, indrindra raha vao mivoaka kely ny headphone mba hampifanaraka azy amin'ny haben'ny lohantsika. Eo amin'ny boaty dia toa tsy mifandanja izy ireo, saingy satria eo amin'ny toerana farany ambany indrindra izy ireo.
Ny sponjy an'ny écouteur sy ny fikasohany dia nanaitra ahy tsara. ny malefaka dia malefaka be, tsy toy ny headphones hafa izay mafy hatramin'ny voalohany. Ny habe hametrahana ny sofina dia mety ho marina, arakaraka ny haben'ny sofin'ny tsirairay. Heveriko fa tsy kely dia kely ny ahy ary mifanentana amiko tsara izy ireo, noho izany dia heveriko fa marina ny habaka ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​afaka mametraka azy ireo manontolo (zava-dehibe amiko).
Eo amin'ny farany ambany amin'ny earphone havanana ananantsika ny bokotra herinaratra (jiro mena rehefa mamaly sy fotsy rehefa eo), ny Seranana 3.5mm ary ny USB.
Momba ny loko dia ao izy loko dimy samy hafa, izay fotsy, manga, mainty, mavo, volontany, ary volomboasary.
Azoko antoka fa miovaova ny kalitaon'ny feo arakaraka izay mihaino ny mozika. Misy ireo mpampiasa izay aleony finday avo lenta ary tsy misy fampitoviana ary avy eo misy olona toa ahy, izay hatramin'ny fahazazako dia nihaino mozika tamin'ny bas ary nitombo kely aho. Raha ny hevitro, tsara kokoa ny feo noho ny headphone hafa Nanandrana aho. Na dia nolazaina tamiko fa tena tsara ny headphone hafa ananako, dia mety ho izany dia miankina amin'ny mozika sy amin'ny feony tsy dia avo loatra. Rehefa somary avo kokoa ny volume dia very ny kalitaony betsaka. Ity dia zavatra tsy mbola nitranga tamiko tamin'ny Parrot Zik 2.0, na raha sendra ahy io dia tsy dia nisy kalitao intsony.
Ny bass-n'ireo headphone ireo dia afaka miakatra avo be nefa tsy misy fiatraikany loatra amin'ny feo, izay mampiseho ny fahaizan'ny sasany azy. Nanandrana headphones aho izay raha mampiakatra be loatra ny basika isika, dia toy ny hoe simba ny headphone, ary zavatra izay tsy dia hitranga amin'ireo Parrots ireo.
Rafitra fanafoanana ny tabataba
Misy zavatra tena mahaliana dia ny rafitra fanafoanana ny tabataba. Ho fanampin'ny teboka roa an'ny fanafoanana ara-dalàna, misy ny fomba maody (mode mode), izay fanafoanana feo izay, amin'ny teoria, dia mamela antsika hahafantatra izay maneno manodidina antsika. Amin'izay nosedraiko dia saika tonga lafatra ny rafitra.
Toa zava-dehibe ny milaza an'izany download the application ho an'ny iPhone Parrot Zik 2.0 fa raha tsy izany dia ho very ny antsasaky ny telefaona. Etsy ankilany, rehefa mitahiry ny preset-tsika isika, ny headphones dia hanome antsika preset manan-tsaina izay nantsoina ho toerana voafaritra ho antsika. Raha ny ahy dia olona maheno karazana isan-karazany toy izany aho vy mavesatraSomary sarotra izany, saingy tsy azo atao, ary tena manakaiky.
Mamela antsika ny Parrot Zik 2.0 fehezo ny zavatra sasany amin'ny iPhone. Mazava ho azy fa ny zavatra voalohany azontsika atao ny fanaraha-maso no mozika. Eo amin'ny earbud ankavanana, ety ivelany izay milamina daholo ary tsy misy marika, misy takelaka mikasika. Azontsika atao izao:
Mitendry / mijanona mozika.
Ampitomboy / ahena ny haavon'ny feo.
Mandrosoa / mihemotra.
Miantso an'i Siri.
El ny tontonana dia mora tohina, Ka amin'ny voalohany dia hijanonantsika tsy nahy matetika ny mozika matetika, saingy heveriko fa tsy hitovy amin'ny fotoana voalohany hikasihantsika finday avo lenta. Ny tiana holazaina dia hoe tsy mifehy ny hery isika raha tsy efa zatra. Raha vantany vao tonga any isika dia tsy te-hanandrana zavatra hafa. Hino mihitsy aza isika fa mila mampiasa hery bebe kokoa noho ny tamin'ny voalohany.
Fampiharana Parrot Zik 2.0
Ny fampiharana dia izay hahatonga antsika hieritreritra fa mampiasa fomba hafa isika. Miaraka amin'izany, aorian'ny fisoratana anarana dia afaka mifehy ny fomba itiavantsika ny feon-kira isika. Azontsika atao izao:
Jereo hoe ohatrinona ny bateria sisa tavela amin'ny findainao.
Ampifanaraho ny fanafoanana ny tabataba. Amin'ny alàlan'ny fikororohana ny rantsan-tànanao dia hiova isika eo anelanelan'ny fanaingoana samihafa. Raha hamono ny mozika isika dia hihaino ny feo ivelany ny rafitra mba hanandramana hanafoana ny fahita matetika.
Apetraho ny reverb.
Mitovy amin'ny fitsoraka eo anelanelan'ny safidy isan-karazany.
Omeo anarana ny headphones.
Ampandehano na esory ilay detector mihetsika, izay hampijanona ny mozika / hampihetsika ny telefaona (handray ilay antso mahazatra) raha esorintsika izy ireo.
Ampandehano na esory ny safidy mba hifandraisana ho azy amin'ny fitaovana farany rehefa velomintsika.
Mametraha fotoana aorian'izay hijanona ny mozika.
Ampandehano ny fampandrenesana ny feo hilaza aminay hoe iza no miantso anay (mila misintona ny feo ianao ary maharitra fotoana fohy ny fametrahana).
Zavatra tsy dia manandanja loatra, fa afaka manova ny lokon'ny interface amin'ny app ianao.
Ny Parrot Zik 2.0 dia manaporofo izany tsy mila entin'ny lamaody isika. Misy headphone tsara kokoa hidina eny an-dalambe, fa iza kosa lavitra ireo Parrots ireo amin'ny resaka kalitao sy safidy. Ny fahafaha-mifehy ny safidy tsirairay avy amin'ny finday avo lenta dia tena ahazoana aina ary vao mainka aza rehefa manamboatra preset ho an'ny vondrona, hira na rakikira manokana isika. Ny vidiny, zavatra mihoatra ny € 300 amin'ny Amazon ary € 349 amin'ny tranokala ofisialiny, tsy azo lazaina fa vidiny ambany io, fa raha ampitahaintsika amin'ny marika hafa izay manome kely kokoa amin'ny vidiny avo kokoa dia tsy azo lazaina hoe be loatra. Nokapohan'izy ireo aho nanomboka tamin'ny fotoana nanombohako nahafehy ny fampiharana.
Famerenana ny: Pablo Aparicio
Tsy manelingelina izy ireo aorian'ny fampiasana ora maro
Azo soloina mora foana ny bateria
Feo tsara amin'ny mozika rehetra
Safidy malalaka isan-karazany amin'ny rindranasa finday
Very endri-javatra tsy misy ny fampiharana
Tsy mampiditra adaptatera ho an'ny herinaratra
Volavola azo hatsaraina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Parrot Zik 2.0, ny headphones tsy misy tariby izay tadiavin'ny hafa
Tena tsara famerenana Paul, na eo aza izany dia homeko marika bebe kokoa izy amin'ny endrika, na dia zavatra manokana kokoa personal aza izany
Amin'ny endriny dia bipolar aho. Tiako ilay manana ny kapoka, saingy azoko izy ireo ary niverina tao anatin'ny 24 ora izy ireo satria nisy ny fanafoanana ny tabatabany (toa tapaka izany). Amin'ireto dia tsy nanana izany olana izany aho, saingy miatrika izany famolavolana izany, izay "nangalatra" ny foko.
Nefa mitandrema, raha ny iray amin'ireo lafy ratsy dia ny endriny ary ny roa hafa dia ny tsy fananana adapter mains ary ilaina ny fampiharana. Ho ahy, ny lafy ratsy dia teboka azo hatsaraina kokoa, ary ny fampiharana tsy fatiantoka velively. Moa ve izany amin'ny fampiharana ny safidy dia ampitomboina 1.000.000.
hahaha mbola tsy nikapoka mihitsy aho ka tsy afaka maneho hevitra momba an'io 😛
Soda Eder dia hoy izy:
Izy ireo dia afaka ampangaina amin'ny karazana charger toy ny iphone na samsung
Mamaly an'i Eder sosa
Runtastic Moment, famantaranandro mahafinaritra ho an'ireo izay te-hanara-maso ny asany